Wararka Maanta: Isniin, July 12, 2021-Wararkii ugu dambeeyay rabshadaha ka socda Koofur Afrika iyo Boobka lagu haayo ganacsatada ajaaniibta ah
Banaanbaxayaasha ayaa waxay boob bililiqo ah u geysteen goobo ganacsi oo ay leeyihiin ajaaniibta ku nool dalkaasi gaar ahaan labada gobol ee Gaunteng iyo KawaZulu Natal.
Banaanbaxyadaan ayaa waxaa dhigaya dad taageerayaal u ah madaxweynahii hore ee dalkaasi Jacob Zuma, kuwaas oo ka careysan xabsi lagu xukumay Zuma, waxaana Booliiska dalkaasi ay sheegeen iney xireen in ka badan 62 ruux oo ka mid ahaa dadka banaanbaxyada rabshadaha wata bilaabay.
Dibadbaxayaasha ayaa saakay xiray inta badan wadooyinka ugu waa weyn magaalada Pretoria gaar ahaan wadooyinka Tsamaya iyo Simon Vermooten oo ahaa wadooyinka ugu muhiimsan magaalada Pretoria.
Ganacsatada Soomaaliyeed ayaa warbaahinta u xaqiijisay in taageerayaasha Zuma oo kumanaan gaaraya ay meel walba taagan yihiin kuwaas oo boob baahsan ku haaya goobaha ganacsiga ay leeyihiin dadka ajaaniibta ah.
Xaalada dalka Koofur Afrika ayaa marba marka ka dambeysa kasii dareysa iyadoo banaanbaxyada iyo boobka lagu haayo ganacsiyada ajaaniibta uu sii kordhayo, xili Booliiska dalkaasi ay isku dayayaan iney xakameeyaan banaanbaxyada rabshadaha iyo bililiqada wata.